Somaliland Oo Beenisay In Madaxweyne Ku-Xigeenka Puntland Socdaal Ku Yimid Sool | Gabiley News Online
Somaliland Oo Beenisay In Madaxweyne Ku-Xigeenka Puntland Socdaal Ku Yimid Sool
Guddoomiyaha gobolka Sool C/qani Maxamuud Jiidhe, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu socdaal ku yimid deegaamo ka tirsan Sool.
Waxaanu sheegay in aanu madaxweyne xigeenka Puntland iyo masuuliyiin kale oo maamulkaasi ka tirsan aanay awood u lahayn in ay yimaadaan deegaamo ka tirsan gobolka Sool.
Isagoona tilmaamay in muuqaalka la baahiyay ee lagu tilmaamay in Axmed Karaash uu yimid Sool aanay waxba ka jirin, isla markaana uu yahay mid been abuur ah oo aanay waxba ka jirin.
“Awood uma leh Axmed Karaash iyo xulafadiisu ay ku yimaadaan Sool. Isagu deegaan ahaan Sool wuu ka soo jeedaa, oo wuu u dhashay. Laakiin, ma iman karro Sool, waana lagu kala baxay, Garoowe ayaanu joogaa isagu. Muuqaalkaasina waxba kama jiraan. Waayo? Maanta waxaynu joognaa aduun Tignoolajiga laga horumaray. Muuqaalka inta Garoowe lagu sameeyo, ayaa la ful saari karaa sawirro Sool ah. Xaqiiqdu waxa weeye, wax jira ma aha.
Hadduu Sool soo geli karro, wuu soo geli lahaa, balse ma iman karro” ayuu yidhi C/qani Jiidhe, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa oo uu kaga qayb gelayay kulan uu wasiirka arrimaha gudaha Somaliland la yeeshay badhasaabyadda goboladda dalka.
Sidoo kale guddoomiyaha Sool ayaa fariin la xidhiidha arrimaha doorashooyinka u diray bulshadda gobolkaasi waxaanu yidhi, “Fariinta aan dadweynaha gobolka Sool u dirayaa waxay tahay, doorashooyinka goleyaasha Wakiiladda iyo deegaanka ayaa inagu soo aadan. Markaa waxaan ugu baaqayaa in ay is diiwaan geliyaan, oo ay cuddudooda muujiyaan.
Dawladuna way garab taagan tahay, anaguna wana garab taagan nahay.
Maanta waxaan ka codsanaynaa dadweyanaha gobolka Sool ku dhaqan, in aanay mar danbe caban. Waan og nahay, oo Is-xan-baarkiina meesha waa laga saaray. Mar haddii taa meesha laga saaray na, waxay ila tahay, codkoodda, kaadhkoodda iyo Fartoodda ayaa shaqaynaysa”.
Geesta kale C/qani Maxamuud Jiidhe, waxa uu ka hadlay ciidamo ka soo goostay Puntland oo lagu soo dhaweeyay gobolka Sool.
“Way jiraan ciidamadaasi, oo in dhawayd ba waa la hadal hayay. Cidii soo gelaysa, ee reer Somaliland ah, ee Soomaaliya ku maqan, soo dhawaadda ayaan leeyahay. Ciidamadda Puntland ka soo goosta na, maalin walba waan ku soo dhawaynaa Laascaanood. 15 askari oo boolis ah ayaanu hore Boocame ugula wareegnay, oo maanta anaga ayaa Boocame haysana. Kuwan danbe ee milateriga ahna maanta ayay yimaadeen, oo gawaadhi Tikniko ah ayay la yimaadeen.
Waxaanan leeyahay soo dhawaadda, weli Farri kama qodenee, oo Axmed Karaash iyo inta uu wataana ha soo gasho, waan soo dhawaynaynaaye”ayuu yidhi badhasaabka Sool.
Dhinaca kale guddoomiye Jiidhe, waxa uu ka hadlay waraaq amar ah oo lagu joojinayay furashadda Cilaajyadda cusub oo uu soo saaray isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Sool.
Waxaanu yidhi, “Waraaqdaasi isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Sool ayaa soo saaray. Anaga na ogaysiin ayaa nala siiyay. Waxyaabaha arrimaha qawaaniinta diinta, dawladu wasaaradda wasaarad ayaa u xil saaran, sheekh ayaana wasaaradda wasiir u ah, isuduwaha Laascaanood u joogaa na, waa nin sheekh ah, guddi culimo ah ayaana jira, iyaga ayuun baanay waraaqdani ka soo fushay, anaga na og ayay na soo siiyeen, sidaas ayaanan kula shaqaynaynaa